थपिए २७३ जना काेराेना संक्रमित – Nepali Profile
थपिए २७३ जना काेराेना संक्रमित
नेपालमा स‌ंक्रमित कूल संख्या ५ हजार ३५३ पुग्याे
बिशाल अर्याल ३१ जेठ २०७७, 5:34 pm
काठमाडाैं । शनिबार २७३ जना काेराेना संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लाे २४ घण्टामा २७३ जनामा काेराेनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएकाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गाैतमले पुष्टि गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै रौतहटमा ९२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सुर्खेतका ४०, दैलेखका ३०, कपिलवस्तुका २५, बाँकेका १८, रोल्पाका १७ र सर्लाहीका १३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
यस्तै, पर्सा र बर्दियामा ६-६ जना, झापा र रुपन्देहीमा ५-५ जना, मोरङ र पर्वतमा ४-४ जना, दाङ र गुल्मीमा २-२ जना, महोत्तरी, बारा, नवलपरासी १-१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । याेसँगै नेपालमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या ५ हजार ३५३ पुगेकाे छ ।
यस्तै कोरोनासंक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. अनुसार पर्साका २५ वर्षीय पुरुष र निजगढ, बाराका ५ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको हो ।